Theo Walcott: Waxaan doonayaa inaan ka ciyaaro weerarka. - Caasimada Online
Home Warar Theo Walcott: Waxaan doonayaa inaan ka ciyaaro weerarka.
Theo Walcott: Waxaan doonayaa inaan ka ciyaaro weerarka.
Weeraryahanka kooxda Arsenal Theo Walcott ayaa ka dhawaajiyey inuu rajeynaayo in laga ciyaarsiiyo booska gool dhaliyaha ka dib markii uu si aan caadi aheyn u ciyaaray kulankii ay kooxdiisu 5-2 ku dubatay Spurs.
Walcott oo 90 daqiiqo ciyaaray ayaa kooxdiisa u dhaliyey hal gool wuxuuna ahaa goolkiisii sagaalaad ee xilli ciyaareedkaan tartamada oo dhan, wuxuuna sheegay inuu jeclaan lahaa in laga ciyaarsiiyo booska weerarka sida Olivier Giroud iyo Lukas Podolski, laakiin taasi ayaa u baahan inuu waqtigeeda sugo maadaama kooxdu ay ciyaaryahano kale booskaas u heysato.
“Mar walba waxaan u heystay inaan ahay weeraryahan,” ayuu Theo u sheegay Stan on Call Collymore.
“Tababaruhu wuxuu I siiyey shan daqiiqo oo dhamaadii ciyaarta ah waxaana dhaliyey gool taasoo aheyd wax fiican, laakiin markii aad tahay sida Olivier [Giroud] kaasoo u ciyaara si fiican ma jirto wax kaa hor istaagi kara guusha.
“Waqtigeygu wuu imaan doonaa, hada dul qaad ayaan sameeyey, laakiin waan sheegayaa sida aan jeclahay, waxaan doonayaa inaan ka ciyaaro goolka hortiisa, kaas ayaa ah booskeyga ugu haboon.”